Sawirro: Xaasaska Messi iyo Suarez oo dukaan ay isla leeyihiin ka furtay Barcelona!!
Sunday, June 24th, 2018 - 17:48:29
Thursday April 20, 2017 - 13:58:13 in Wararka by Muuse Cabdi
Lionel Messi ayaa waxaa uu u muuqdaa mid sii joogaya, markii laacibka dalka Argentine Ooridiisu ay Dukaan kabaha lagu Iibiyo kula shirkowday gabadha uu qabo Suarez xilli lala xiriirinayay in uu aadi karo Manchester City .
Messi ayaa si xooggan loola xiriirinayay in uu la midoobi karo Pep Guardiola markii uu ku fashilmay heshiiska in uu badiyo, xilli bilo yar uun ay ka harsanyihiin qandaraaska uu kula joogo kooxdiisa.
Iyadoo labada dhinac aysan heshiis aheyn, Manchester City ayaa indhaha ku heysay ka faa’iideysiga Arrintaas iyadoo wadahadal la furtay laacibkan, waxaase hadda muuqaneysa in Barcelona xiddiggooda uu sii joogayo.
Antonella Roccuzzo ayaa waxay dukaan kabaha lagu gado ka wada furteen xaaska Luis Suarez, Sofia Balbi magaalada Barcelona markii ay la talin ka heleen gabadha u dhalatay dalka Argentine ee dharka naqshadeysa – Ricky Sarkany.
Ganacsigaan cusub ayaa u muuqda mid Messi uu ku doonayo in uu kusii joogo Barcelona waxaana la sheegayaa in ay jiraan warar aan la hubin oo xaqiijinaya in uu heshiis cusub oggolaaday, kaasoo la rumeysanyahay in sanadkiiba uu ku kici doono £35milyan haddiiba uu saxiixo bisha soo socota.
Messi ayaa heysta kaliya 1sano oo qandaraaskiisa waqtigan ah, waxaana soo gaaraya dalbaad ka imaanaya Europe, balse kooxda reer Catalonia ayaa aad ugu kalsoon in wiilkan uusan meelna u socon.
Ma jiraan wax dhibaato ah, maaddaama uu Suarez oo qandaraas kordhiyay ku xirtay lugta, waxaana laacibkaas oo laga saxiixay December 2016, uu kooxda sii joogayaa tan iyo 2021-ka xilli heshiiska xaasaska labadan laacib uu qasbi karo in uu sii joogo.